MODA | Article Detail | ထူးခြားသွက်လက် ကေသာထိန်းနည်းပညာ ၇ချက်
ထူးခြားသွက်လက် ကေသာထိန်းနည်းပညာ ၇ချက်
ဆံကေသာလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပျိုမေတို့သိသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ...
လှပတဲ့ဆံနွယ်လေးတွေရရှိဖို့ဆိုတာကလည်း မိန်းကလေးတွေအားလုံးလိုလားတောင့်တတဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံတစ်ရာပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ MODA ပရိသတ်မိန်းကလေးတွေအားလုံး မဂ္ဂဇင်းသက်တမ်းသစ်မှာကေသာအလှတန်ခိုးတိုးပွားအောင်လို့ ဆံကေသာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနည်းသစ်များနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ New Hairstyle နဲ့ လန်းနေတဲ့ Miley Cyrus
Miley Cyrus က သူမရဲ့ Hair Style အသစ်နဲ့ အမိုက်စား Photo တွေကို သူမရဲ့ Instagram မှာ တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ Miley Cyrus တစ်ယောက်ကတော့ New Hairstyle နဲ့ လန်းနေပါတယ်နော်။
Fashion နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြဲမိမိုက်နေတဲ့ Miley Cyrus က သူမရဲ့ Hair Style အသစ်နဲ့ အမိုက်စား Photo တွေကို သူမရဲ့ Instagram မှာ တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ သီချင်းအသစ်လည်း မကြာခင်မှာထွက်ရှိလာတောမယ်လို့ ကြေငြာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Instagram မှာတော့ "New Hair. New Year . NEW MUSIC! " ဆိုတဲ့ Caption နဲ့ တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ Cyrus ကို ဆံပင်ရှည်နဲ့သာ တွေ့ခဲ့ရပြီး သူမနောက်ဆုံး ဆံပင်ပုံစံပြောင်းလဲခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လ ကဖြစ်ပါတယ်။ Cyrus ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေဟာ အမြဲ update ဖြစ်နေပြီး Hair Colour တွေဟာလည်း ဆန်းသစ်တဲ့ colour တွေနဲ့ အမြဲလန်းနေတဲ့ cele တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာဆောင်းနေ့ရက်တွေတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်နေမယ့် Winter Hair Trend
ဘယ်လိုပုံစံတွေကို သင်နဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
ချမ်းအေးတဲ့ ဆောင်းကာလလေးမှာ စတိုင်လ်ကျကျ အမိုက်စား Hair style တွေကို ထုံးဖွဲ့ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးမယ်နော်။ ဆောင်းရာသီကာလလေးမှာ ဆံပင်ကို စည်းထားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ချထားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖက်ရှင်ကျနေဖို့က အဓိကဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုပုံစံတွေကို သင်နဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
Ponytail ထုံးဖွဲ့ခြင်းဟာ fashion ကျစေတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် Hair style တွေထဲမှာ တစ်မျိုးအပါအဝင်ပါ။ International celebrity တော်တော်များများရဲ့ ပွဲတက် Hair Fashion တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Retro Style အပြင်အဆင်တွေမှာလည်း High Ponytail ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် ရိုးမသွားတဲ့ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုလည်း ဖြစ်သလို ဆောင်းတွင်းဖက်ရှင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Hair Fashion လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲလမ်းသဘင်နဲ့ EDM ပွဲသွားလေ့ရှိတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် လိုက်ဖက်မယ့် Fashion ပါ။ တစ်ခေါင်းလုံးကို ကျစ်ဆံမြီး သေးသေးလေးတွေအပြည့် ကျစ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ ဖက်ရှင်ကျပြီး အမိုက်စားဖြစ်နေပေမယ့် ညဘက် အိပ်တဲ့အခါမှာတော့ နဲနဲလေး အခက်တွေ့စေမှာပါ။ ကျစ်ထားတဲ့ ကျစ်ဆံမြီး သေးသေးလေးတွေကို စုချည်ပြီး jewel ဒါမှမဟုတ် fancy တွေနဲ့လည်း ပျိုမေတို့ နှစ်သက်သလို အလှဆင်နိုင်ပါသေးတယ်နော်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ဆံပင်တွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ထုံးဖွဲ့လိုသူတွေအတွက်ကိုတော့ Low Ponytail ထုံးဖွဲ့ဖို့အတွက် အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်။ ခပ်ပြေပြေ ခပ်လျော့လျော့ ထုံးဖွဲ့မှုက ရိုးရိုးလေးနဲ့ သင့်ကို စမတ်ကျနေစေမှာပါ။
Variations on the Bob
နွေရာသီမှာ ပူအိုက်လို့ ညှပ်ထားတဲ့ ဆံပင်တိုတိုတွေကို ဆောင်းတွင်းရောက်တဲ့အခါ ဖက်ရှင်ကျကျပုံသွင်းပြီး အမိုက်စားပြင်ဆင်လို့ရပါပြီနော်။ ဆောင်းရာသီနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ color ဖျော့ဖျော့လေးတွေနဲ့ ပုံသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပျိုမေတို့ရဲ့ Hair Fashion ဟာ အလန်းစားဖြစ်နေမှာပါ။
ဒါကြောင့် ဆောင်းရာသီမှာ ဆံပင်တိုနဲ့ ဂေါ်မယ့် ပျိုမေတို့အတွက် အကြံပြုပေးချင်တာကတော့ Pixie Style Hair Fashion ဟာ အမြဲ up to date ဖြစ်နေစေမယ့် ဖက်ရှင်ပါ။ Shorter hair fashion နဲ့ တွေ့ရသူတော်တော်များများဟာ မိတ်ကပ်ကို အပြည့်အဝခြယ်သတတ်ကြပြီး Jewellery ကြီးကြီးတွေကို ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။
90s born လေးတွေရဲ ႔ အသည်းစွဲ Hair Accessory တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Thick Headband
ဘီးကုတ်လေးတွေပြန်တက်ကြရအောင်… အခုဆိုရင်သိပ်မတွေ ႔ရတော့တဲ့ ဘီးကုတ်လို ႔ ခေါ်တဲ့ Headbandအမျိုးအစားကတစ်ခေတ်ပြန်ထလို ႔လာပါတယ်။ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ဖက်ရှင်တွေထဲကမှ90s born တွေအရမ်းကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ hair accessory တွေထဲကတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့ ဘီးကုတ်လေးတွေ ကထိပ်ဆုံးကမပါမဖြစ်ပါ။ ဆံပင်အတိုအရှည် ဘာနဲ ႔မဆိုအဆင်ပြေလိုက်ဖက်နေပါတယ်။ ဘီးကုတ်အပါးလေးတွေရှိသလိုအထူတွေလည်းတပ်ကြပါတယ်။ ပြောင်လေးတွေရှိသလိုဒီဇိုင်းလေးတွေအရုပ်လေးတွေနဲ ႔စုံနေ အောင်တွေ ႔ရမှာပါ။ ကလေးတွေကအစ အရွယ်ရောက်ကောင်မလေးတွေအဆုံးဖက်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ ႔ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဒီဘီးကုတ်လေးတွေကအခု ၂၀၁၉ ရဲ ႔ Hair accessories trends တွေထဲကတစ်ခုပါ။ Thick headband လို ႔ ခေါ်တဲ့ဒီဘီးကုတ်ထူထူတွေကိုပိုသား ၊ ကတ္တီပါသား ၊ပုလဲစတာတွေနဲ ႔ ဖန်တီးထားကြတာကိုတွေ ႔ရပါတယ်။ ဆံပင်ကိုအနောက်ပြန်အပြောင်သိမ်းထားတဲ့ပုံစံမို့မျက်နှာကိုရှင်းရှင်းလေးနဲ ႔ ပေါ်လွင်စေမှာပါ။ အမိုက်စားဖက်ရှင်ကိုပိုထူးခြားစေတဲ့ ဘီးကုတ်ဖက်ရှင်လေးကပိုပြီးခေတ်စားလာမယ့်ဖက်ရှင်လေးမို ႔ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီကနေစတစ်ဆင့်ဘီးကုတ်လေးနဲ ႔ အထာကျတဲ့ဆံပင်ပုံစံလေးကိုဖန်တီးနိုင်ပါစေနော်။